Ukuphupha ngetotshi Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ubume betotshi buquka intonga eyenziwe ngomthi okanye ngentsimbi, enikwa izinto ezinokutsha. Kwixesha elidlulileyo, iitotshi zazigqunywe ngetela okanye ioyile, kodwa namhlanje zikho ezinye iintlobo, ezinjenge-wax okanye i-magnesium. Iitotshi zikhanyisiwe esiphelweni sazo kwaye ngokuthe ngcembe ziyatsha.
Itotshi ihlala ibaluleke kakhulu ngokunxulumene neMidlalo yeOlimpiki. Kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi kweMidlalo, ilangatye leOlimpiki likhanyisiwe e-Greek Olympia emva koko yaqhutywa kwibala lemidlalo lakudala. Nantsi ngoku ihanjiswa kwimbaleki yokuqala ngohlobo lwetotshi. Ngokwesiqhelo zithuthwa ziimbaleki ezidlulayo ngeenyawo, kodwa oku kuhlala kungenzeki kwimigama emide. Ezinye iindlela zothutho ziyasetyenziswa apha, ezinje ngamahashe, amaphenyane kunye nezinye. Okulandelayo, imbaleki yokugqibela ilayitha ilangatye leOlimpiki kunye netotshi eyiphatha xa ifika ebaleni. Ngokwesiko, umlilo uyacinywa kwakhona ekupheleni kweeOlimpiki. Umlilo oweza netotshi luphawu loxolo kunye nokumanyana phakathi kwabantu behlabathi.
Inkqubo yokukhanya kwetotshi iyaziwa, eyayivela kuqala kwicandelo lezemfundo. Ngexesha leSocialism yeSizwe eJamani, umngcelele wetotshi phantsi kukaAdolf Hitler okanye umngcelele wawusetyenziselwa ukubhiyozela esidlangalaleni umthetho. Ukuba ngoku uzibona ephupheni uphethe itotshi ezandleni zakho kwaye mhlawumbi uyinxalenye yomngcelele wetotshi, zininzi iindlela zokutolika.
1 Uphawu lwephupha «itotshi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itotshi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «itotshi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itotshi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ubona itotshi evuthayo emaphupheni akho, ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha, iya kuzisa ukukhanya kubumnyama kubomi bokuvuka, okanye ngamanye amagama, uya kuba kumcimbi. Ukucaca Isenokungabonakali ukuba isonjululwa ngaphambili.
Ukuba uphethe itotshi ngokwakho, ithembisa impumelelo kwezorhwebo nakwinqanaba labucala onokulindela lona, ​​kuba oko kuthetha ukuba uya kuthandwa ngokunyanisekileyo. Kwelinye icala, ukuba itotshi isiwa esibhakabhakeni, kuya kufuneka ulinde idola y IKummer songela.
Iitotshi ezicinyiwe okanye esele zicinyiwe kufuneka zitolikwe ngendlela engeyiyo kwaye zingangumqondiso wamathemba kunye namathemba angazalisekanga. Iidayes ukubonwa. Inokuba kunjalo Ukuphoxeka okanye ne-duel.
Uphawu lwephupha «itotshi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kutolika umfanekiso wephupha letotshi njengomnqweno walowo uphuphayo. Uphuhliso olungaphezulu yobuntu bakho. Imalunga nokuzithemba kunye nesidingo sokuqhubela phambili. Nazi iimeko zobuqu ezithatha isigqibo malunga nokutolikwa ngokuchanekileyo. Unokuziva ngathi abanye abantu abakuqondi okanye ungakufumana kunzima ukuqonda imeko yezimo okanye isimilo.
Apha itotshi inokuba ngumqondiso wokukhanyisa ngaphambili efihliweyo okanye ebumnyameni kwaye ke unethuba lokugqibezela Ukuqonda okutsha kananjalo nethuba lokuthatha amanyathelo amatsha okuphucula kwaye uvumele utshintsho.
Siyayazi nento ethi "sukulinda ixesha elide." Oku ngokusisiseko kuthetha ukungacingi ngayo ixesha elide nokwenza nje izinto. Nabani na owenza ngokungathandabuzekiyo nangokulumkileyo ebomini babo, ke ngoko, unokujonga iphupha labo lesibane njengesimemo sokubeka emngciphekweni okungaphezulu kwaye bathathe isigqibo sendalo.
Uphawu lwephupha «itotshi» - ukutolika kokomoya
Idangatye lomlilo letotshi lifanekisela ukutolikwa kwamaphupha ngokwembono yokomoya. Amandla obomi kunye nokuqaqamba okuqaqambileyo kubhekisa ezingqondweni kunye nokukwazi ukudibanisa ukukhanya ebumnyameni bokungazi nto.